Azon'i Jaona Elite sary ny fanondranana andramena - Vaovao farany
Home / andramena / bois de rose / Jaona Elite / Azon'i Jaona Elite sary ny fanondranana andramena
Azon'i Jaona Elite sary ny fanondranana andramena
Harijaona Randriarimalala, izay fantatry ny rehetra amin'ny anarana hoe "Jaona Elite" dia tsy vitan'ny hoe depiote voafidy teto Madagasikara fotsiny fa mpanao fanadihadiana gaigilahy ihany koa. Ankoatr'ireo zavatra maro efa vitany dia fantatra izao fa nahazoana vokatra tsara io asany faharoa io. Rehefa nanao itony antsoina hoe "infiltration" itony izy dia voaporofony an-tsary izao fa tena misy ny fanondranana andramena na "bois de rose" eto Madagasikara.
Araky ny fanazavan'ireo nandefa ny sary dia asehon'ny sary voalohany hono izy eo am-pakàna sary amin'ny findainy, manao lobaka fohy tanana carreaux mena, ny sary faharoa koa dia ahitàna azy, tsy niova fitafy akory, midina ny sambo izay mitondra andramena.
Efa marobe ny olona midera azy sahady ao amin'ny tambazotra sosialy Facebook amin'izao fahombiazana izao, na dia tsy mbola voamarina tsara aza hoe tena izy no hita amin'ny ireto sary miparitaka ireto, noho izy mbola tsy nahazoam-baovao sy tsy dia tia misehoseho loatra.
Fitaratra ho an'ny solombavam-bahoaka namany izao fihetsik'Andriamatoa Jaona Elite izao, izay mijery ifotony ny olana eto amin'ny firenena, tena reharehan'ny antoko HVM izay tohananay. Izany ka tena solombavam-bahoaka!
Atoa Henry Rabarinjaka, nangataka ny hampidirana ity sariny ity ato amin'ny tranonkala,
Tsy misy ifandraisana amin'ny lahatsoratra eo ambony.
Azon'i Jaona Elite sary ny fanondranana andramena Reviewed on juillet 03, 2016 Rating: 5
andramena X bois de rose X Jaona Elite
Fanjakàna hoy ianao? Fa iza no mpanjakantsika?
Mba mailo ihany rehefa manao kaonty Facebook fôsik...